मनोरंजन Archives - Halesi News
काठमाडौँ। पहिलो साङ्गीतिक प्रस्तुतिको लागि 'नेपाल आइडल २' का टप ५ प्रतिस्पर्धी अहिले जापानमा छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय साङ्गीतिक यात्रामा नेपाल आइडलका टप ५ प्रतिस्पर्धी रवि ओड, विक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी, सुमित पाठक र अमित बराल जापान पुगेका हुन्। बुधवार जापानको फुकोवोका आयोजित साङ्गीतिक कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिए। नेपाल आइडल टप ५ को जनवरी ४ मा नागोया र ५ मा टोकियोमा लाइभ प्रस्तुति रहनेछ । कार्यक्रममा नेपाल आइडलका प्रस्तिस्पर्धिले नेपालीलाई साङ्गीतिक मनोरञ्जन दिनेछन्। हेर्नुस् नेपाल आइडल रवि ओडको प्रस्तुति। https://youtu.be/f-I0vrElSvs sabhar Dcnepal bata Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew weeks, it can also help you figure things out that you would not have understood witho
एजेन्सी। चाहे कुनै चित्रमा हेरौ, टेलिभिजनमा हेरौ भगवान विष्णु विभिन्न अवतारमा देखिन्छन । कुनैमा उनी गरुडमा सवारी भएको देखिन्छ, कुनैमा शंख, चक्र, गदा, पद्मा साथ देखिन्छ । कति चित्रमा चाहि उनी सर्पको ओछ्यानमा आरमले सुतेको देखिन्छ ।हिन्दु धर्मले यो विशाल सर्पलाई शेषनाग भनेको छ । यस चित्रणको खास महत्व छ ।भगवान विष्णुले केहि अवतार लिएका छन् । उनलाई पापको सागरबाट दुनियाँलाई मुक्त गर्ने प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । भगवान विष्णुको वाहन त गरुड हो । तर, शेषनाग पनि उनको प्रत्येक अवतारमा जोडिएको छ । समयको मार्गदर्शक जब संसारमा पाप बढेर गएको थियो, तब विष्णुले विश्वको उद्वार गरेका थिए । शेषनाग ‘अनन्त’ अर्थात जसको कुनै सीमा छैन, त्यसको प्रतिक हो । भगवान विष्णुले उपयुक्त समयमा मानव जातिको मार्गदर्शन गरेको थियो । यहि कारण उनी सर्पले लपेटिएको देखाइएको हो । विष्णुको अभिव्यक्ति हरेक पटक संसारलाई मुक्त गर्
काठमाडौं । बाल गायिका दिप्सी भट्टको नयाँ गीत ‘आमा’ रिलिज भएको छ । भट्टको एक स्वरमा रहेको गीतको म्युजिक भिडियो सामाजिक सञ्जाल युट्युवमा शुक्रबार रिलीज भएको हो । युट्युबमा सार्वजनिक भएपछि चर्चामा रहको यो गीतलाई धेरैले मन पराएका छन् । बालगायिका दिप्सीसँगै मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे) र पुजा पाठकको अभिनय रहेको छ । भिडियोमा दिप्सीले कुशल नृत्य पनि प्रस्तुत गरेकी छिन् । पढाई सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहेकी भट्टको विगतमा पनि थुप्रै गीत तथा भिडियो सार्वजनिक भइसेकेको छ । यस भिडियोमा दिपेन्द्र भट्टको क्यामरा सम्पादन, निर्देशन शिव बि कको निर्देशन र शब्द तथा संगीत आर बी लामाको रहेको छ । https://youtu.be/NAbLMdiVaAE Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew weeks, it can also help you figure things
दिपाश्रीको श्रृंखला खतिवडालाई हिरोइनको अफर, फुलन्देको आमाले हँसाएर मुर्छा पारिन् (भिडियो)
काठमाडौँ। नेपाल टेलिभिजनमा जितु नेपालले सञ्चालन गर्ने मुन्द्रेको कमेडी क्लब हरेको सोमबार राति ९ बजे प्रसारण भइरहेको छ। दीपाश्री निरौला सभापति रहेको कार्यक्रममा नेपालका चर्चित हास्य कलाकारहरूको पनि सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा जितु र दीपासँगै राजाराम पौडेल, राजेन्द्र नेपाली, उमेश राईलगायतका हास्य कलाकारहरूको अभिनय देख्न सकिने छ । राजेन्द्र लट्टेको रूपमा देखिएका छन् भने उमेश राई फुलन्देकी आमा बनेकी छिन् र राजाराम पौडेल घरबेटी बनेका छन् । मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा अबको नयाँ एपिसोडमा मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृङ्दला खतिवडा आउने भएकी छिन् । भर्खरै मात्र उनले यस कार्यक्रमको लागि सुटिङ सकाएकी छिन् र सोही सुटिङको क्रममा केही मिडियाहरूले मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृङ्खला र मुन्द्रेको टिमसँग केही रमाइलो कुरा गरिएको छ जुन आज हामी यस भिडियोमा रमाइलो छ युट्युब च्यानलले तयार पारेको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
मितको कोठामा पुग्दा भेटिए पुष्पन, यसरी हुँदैछ साङ्गीतिक सहकार्य (भिडियो)
काठमाडौँ। यथार्थपरक गीतमा आफ्नो स्वर दिएर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुटै पहिचान बनाउन सफल गायक तथा सङ्गीतकार हुन् पुष्पन प्रधान। उनी भारतमा जन्मिएर पनि नेपाली सङ्गीतलाई आफ्नो योगदान दिंदैछन्। उनले स्वर दिएका गीतले वास्तविक जीवन भोगाइको कुरा बोल्छ। पछिल्लो समय नेपाल आइडलबाट उनी चर्चामा छन्। नेपाल आइडलका टप ६ प्रतियोगी अमित बरालले उनको गीत गाएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ। तर उनी नेपाली गीत सङ्गीतमा विगत १९ वर्षदेखि सक्रिय छन्।विभिन्न मिडियासँगको कुराकानीमा उनले अमित आफ्नो विधाता भएर आएको बताउने गरेका छन्। उनले अमितसँग साङ्गीतिक सहकार्य गर्न घोषणा पनि गरिसकेका छन्। हेर्नुस् अमित र पुष्पनसँग गरिएको कुराकानी। https://youtu.be/0YZFkxVCZTY sabhar Dcnepal bata Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew wee